Boggaaga, Bloggaaga, ama Quudinta Cunnada malagu fidiyaa? | Martech Zone
Sabtida, Diisambar 23, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Hal dariiqo oo qabow oo lagu helo goobo waa juqraafi ahaan. Xaqiiqdii waxaan ogaaday in saaxiibkay shaqada jooga uu leeyahay baloog isaga oo ka helayaa khariidad. Waxaa jira dhowr boggag internet oo halkaas ah oo aad ku dhejin kartid bartaada blogga ama goobta uu ku yaal iskuduwaha juqraafi ahaan. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan doontaa inaad dhab ahaantii ku darto qaar ka mid ah astaamaha meta-ka si loo helo.
Waxaan doonayey inaan tan sameeyo in muddo ah, laakiin runtii ma jirin qalab fudud oo halkaa yaal oo lagu dhisi karo astaamaha aniga… ilaa hadda! Caawa ayaan bilaabay Cinwaanka Fix.
Goobta waxaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo cinwaanada, lagana helo loolka iyo loolka, isla markaana si toos ah loo soo saaro geotags loogu talagalay websaydhkaaga, blogga iyo / ama iyaga RSS cunto siiya.
Waa tan horudhac:
Kaliya koobi oo ku dheji calaamadaha meta ee cinwaanka boggaaga ama bartaada bartaada kale. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay!
FeedPress sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad geotag RSS quudiso. Waad nuqulan kartaa oo ku dhejin kartaa loolka iyo Longitude-gaaga Feedburner hoosta Optimize - Geotag quudintaada.
23, 2006 at 11: 23 PM
Fikrad qabow - dhaqan gelin fiican. Kaliya xagee waqtiga ka heshaa !?
23, 2006 at 11: 26 PM
Mahadsanid, RoudyBob. Carruurtaydu waxay joogaan hooyadood ciidda Kirismaska… taas oo ka dhigaysa bachelor Doug iyo kombuyuutarkiisa Waxaan hayaa mashaariic badan oo sidan oo kale ah oo la bilaabay oo aan waligood dhammaan. Waxay noqon doontaa toddobaad wax soo saar leh!
24, 2006 at 12: 44 AM
OK Tani waa wax weyn. Mahadsanid.
24, 2006 at 1: 53 AM
24, 2006 at 11: 48 AM
Had iyo jeer waan aqriyaa oo waan ka fikiri jiray, laakiin weligay kuma soo dhowaan inaan sameeyo. Fikrad fiican iyo qalab fiican.
24, 2006 at 12: 01 PM
Waxaan la socday Google. Rumayso ama ha rumaysan, khariidadooda waa stil beta. Haddii aad rabto inaad dhisto codsi ka baxsan oo aad damaanad qaaddo waqtiga, waxay bixiyaan nooc shirkad shati leh.
Waxaan la kulmay in yar oo ka mid ah kooxdooda oo ku sugan Mountain View sanadkii la soo dhaafay iyo qalabka aragtida jacaylka ee sidan oo kale ah sidaa darteed anigu kama walwalayo arrintaas. Maahan sida inaan ku garaaci doono marinkooda hits!
Dhanka CSS, waxaan ku jabsaday IE kaliya CSS halkaas. Dhamaan way fiicantahay. Waan ogahay in taasi aysan ahayn habka ugu fiican, laakiin IE way nuugtaa si aad u xun oo runti anigu dadaal badan ma gelin mar dambe. Waan ogahay inay taasi lumin karto daawadayaasha… laakiin waa hagaag.
25, 2006 at 11: 46 PM
Cusbooneysiin: Waxaan hagaajiyay cayayaanka qaarkood oo soo celinayay cinwaanada shisheeyaha qaarkood oo aan xog lahayn. Weli waxaan ka qabaa arrin ku saabsan soo celinta magaalada haddii aan joogo Kanada laakiin waan ka shaqeynayaa!
Jan 3, 2007 saacadu markay ahayd 6:20 PM
Mike oo reer Jarmal ah
Xor ayaad u tahay inaad iska dhigto oo ku qor liiska boggaaga http://www.gmapsdirectory.com
Jan 5, 2007 saacadu markay ahayd 7:39 PM
Mahadsanid, Brian! Caawa uun baan dhigay!
Waxaan ku tijaabiyay cinwaankayga oo ku yaal Norway, waxaanan helay farriin "Waan ka xumahay" Baashaal waxaan isku dayay inaan si fudud ku galo "Norway". Waa inaan qoslaa markaan helay natiijada 🙂
Mahadsanid! (oo halkaas hadal xamaasad ah maleh!)
Jan 27, 2007 saacadu markay ahayd 12:49 PM
Wanaagsan Waqooyiga Ameerika, laakiin ha taageerin UK.
Waxaan u isticmaali karaa Geocoder kale UK oo u shaqeeya sida
Jan 27, 2007 saacadu markay ahayd 1:08 PM
Mahadsanid, mapperz… iyo goob weyn! Ma ogtahay wax xaddidaad ah oo ku saabsan isticmaalka mashiinka geocoding emad? Waxaan ku tijaabin karaa beta si aan u arko sida ay wax u socdaan. Waxay sidoo kale kor u qaadi laheyd shaqeynta tan iyo markii aan lahaan karo dadka isticmaala dhowr siyaabood (taleefan, iwm.)
Jan 27, 2007 saacadu markay ahayd 1:40 PM
Xaddidnaanta ayaa ah isha aan si cad loo caddeyn. Laakiin waan hubiyey in xogtu aysan taaj u noqonin nuqul-sameynta (adoo hubinaya barta barta (xogta boostada) iyo cinwaanka cinwaanka.
Waxay ku saabsan tahay 93% sax ah Boqortooyada Midowday oo dhan.
Miyaad haysaa wax tusaale RSS ah?
Isku dayay in lagu daro joornaalada (.xml) tan
Waxay la shaqaysaa RSS Cimilada RSS
Jan 27, 2007 saacadu markay ahayd 4:44 PM
Waxaan aaminsanahay inay ahayd arrin xasaasi ah kiis ( vs. ). Waxaan wax ka beddelay koodhka sidaa darteed waa wax walba
Ma aniga uunbaa mise jeexjeexa KML ma cusbooneysiinayo markasta oo aan dhaqaajinayo calaamadeeyaha?
Wax kasta oo aan tan ahayn: fikrad weyn iyo wax aad u faa'iido badan. Kaliya waxaan si qaldan ugu isticmaalayaa inaan sawiro lakabyada geesoolayaasha (yacni gacan-ku-qoridda LineString-xubno) khariidadaha google-ka qaarkood.
Waad ku mahadsan tahay inaad taas ii soo bandhigtay! Hada waa la hagaajiyay! Ku takri-fal dhammaan wixii aad jeclaan lahayd.
Apr 1, 2007 at 8: 14 PM
Waa salaaman tahay, magacaygu waa Ryan Updike. Waxaan ku sameynayaa Mashruuca Google Earth ee Fasalkeena Juqraafiga oo la shaqeeya KML. Ma awoodi doontaa inaad naga caawiso inaan hagaajino ama helno qaar ka mid ah koodhka si aan u soo saarno qaar ka mid ah koodhka KML? Waxaan isku dayeynaa inaan baranno sida loo calaamadeeyo xogta dhibcaha sida wax soo gelinta, ka dibna aan u rogno wax soo saarka xml code. Wixii talo ah ee aad bixin lahayd aad baa loo qadarin lahaa. Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga.
Apr 1, 2007 at 10: 37 PM
Hubaal, Ryan! Waan ku farxi lahaa inaan ku caawiyo. Baadhid boostadan sidoo kale isticmaalka faylasha KML. Sidoo kale hadda waa la heli karaa iyada oo loo marayo Google API si loo dhiso goob kuu gaar ah oo leh faylka KML (in muddo ah waxaa laga heli karaa oo keliya bogga khariidaynta Google.
May 11, 2007 at 2: 38 AM
Haa, Qoraal aad u fiican. Laakiin ma jecli FeedBurner… Iyo Waa maxay KML-file?
May 11, 2007 at 5: 57 AM
Nabade Paul, waad ka akhrisan kartaa KML faylasha maqaal aan qoray. Asal ahaan waa feylal juqraafi gaar ah ku qoran eXtensible Markup Language (XML). Waxaa sidoo kale jira shaybaarka boostada sidoo kale!
Oktoobar 3, 2007 at 10:45 PM
Tani waa qalab weyn. Way fiicantahay in la helo fududahay in la isticmaalo qalabka geotagging sidan oo kale.
Waxaan jeclaan lahaa inuu jiro buug hage ah oo isticmaala geotagging. Ma jiraa qof og liiska?
Oktoobar 4, 2007 at 7:12 AM
Waxaa jira Khariidadda quudinta. Waligey kuma arag ficil aad u fara badan goobta, in kastoo.
Oktoobar 7, 2009 at 2:11 PM
Qalab weyn. Waxaan u isticmaali jiray inaan ku barto khariidaynta. Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga iyo shaqadaada.